Gudoomiyaha Degmada Boondheere Oo Ku Fashilmay Hanaanka Shaqo Ee Degmada?
13 February, 2018 in Wararka by Super Admin
Degmada Boondheere waxaa' aay ka mid tahay Degmooyinka qadiimiga ah sidoo kalane xiligaan ka mid ah Degmooyinka ugu wadooyinka bur bursan Magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha Degmada Boondheere Zainab Yuusuf Wehliye, ayaa ku guul dareeysatay wax ka qabashada Nadaafada Amniga iyo dib u dhiska wadooyinka dhex mara Degmada Boondheere sida Wadada Gen: Daa’uud oo ka mid ah Wadooyinka ugu caansan Gobalka Banaadir.
Gudoomiyaha Degmada Boondheere Zainab Yuusuf Wehliye yaa sidoo kale degmada Boondheere ka maqneyd inta badan ayadoo deegan ka dhigatay Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya.
Gudoomiyaha Degmada oo haatan ka baqdin qabta in badal lagu sameeyo ayaa haatan dalka dib ugu soo laabatay Xaflad wax qabad igu sawir ahna ku qabatay degmada ka dibna ugu yeertay Gudoomiyaha Gobalka Banaadir Eng: Cabdiraxman Cumar Cismaan Yariisoow.
Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Cabdulqaadir Macalin Nuur ayaa u tagay Gudoomiyaha Gobalka Banaadir si loogu dhaadhaciyo in xilkeede loo daayo oo aan lagu badalin shaqsi wax u qaban kara shacabka degan Degmada Boondheere.
Si kastaba dadka degan Degmada Boondheere ayaa xiligaan si weyn u doonaya is badal dhaqsiya lagu sameeyo Hogaanka degmadaasi si wax loogu qabto shaqada Degmada oo aad u dayacan maadama Hogaankii hore wax qabad xumo lagu dhaliiyay.
Dilal saacadihii la soo dhaafay ka dhacay degmada Afgooye & duleedka Muqdisho
Imaaraadka oo shaaciyay waqtiga uu shaqo billaabayo Saldhigga Milatari ee Berbera
Waa kuma Gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay Degmada Howl-wadaag ?
Taliyaha Booliska Degmada Kaaraan oo xilkii laga qaaday loona magacaabay mid cusub